YEYINTNGE(CANADA): Thursday, December 09
9 Dec 2010 ဒိုင်ယာရီ
For Gmail user.....
DASSK with bare-foot.jpg
9 Dec 2010 Yeyintnge's Diary.doc
2144K View Download
9 Dec 2010 Yeyintnge's Diary.pdf
3646K View Download
9 Dec 2010 Yeyintnge's Diary
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 12/09/20100အကြံပြုခြင်း
By ဦးကျော်ဇံသာ ဗုဒ္ဓဟူး, 08 ဒီဇင်ဘာ 2010
ဒု-ပင်လုံညီလာခံ စင်ပြိုင် အာဏာ ယူဖို့မဟုတ်၊
By ဦးဇော်ဝင်းလှိုင် ကြာသပတေး, 09 ဒီဇင်ဘာ 2010
ဒုတိယပင်လုံညီလာခံ ခေါ်ယူတော့မည်ဆိုသောအခါ စစ်အစိုးရက သွေးဖျားဖျားပြီး ထအော်လာပြီဖြစ်သည်။ မခေါ်ရသေးသော လွှတ်တော်တွင် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးကို ဆွေးနွေးလို့ ရသည်ဟု ပြောဆိုလာနေသည်။ စစ်အစိုးရအနေဖြင့် တိုင်းနှင့်ပြည်နယ်အနှံ့ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့ တွေနှင့် နပမ်းလုံးနေသည်မှာ နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်နေပြီ။ ယခုအချိန်ထိ ယမင်းငွေ့ဝေနေတုံး၊ ယင်းပြသနာမျိုးကို ဖြေရှင်းကြရန် အာဏာကိုမတရားရယူထားသော လက်နက်အားကိုးဖြင့် အုပ်ချုပ်နေသည့် စစ်အစိုးရမှာ အပြည့်အ၀တာဝန်ရှိသည်။ နိုင်ငံရေးအရပြသနာများစွာ ရှိနေသည်ကို နိုင်ငံရေးအရ မဆွေးနွေးဘဲ လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခဖြင့် ပြန်လည်တိုက်ခိုက်ဖြေရှင်းနေသမျှ ယင်းမီးတောက်မီးလျှံများမှာ မည်သည့်အခါမျှ မငြိမ်းသတ်နိုင်၊ ထို့ ကြောင့် မည်သူမဆို ယင်းပြသနာကို ဖြေရှင်းရန်ကြိုးပမ်းကြမည်ဖြစ်သည်။ စစ်အစိုးရက မဖြေရှင်းလျှင် အခြားလူများက ဖြေရှင်းရန် အားစိုက်ကြမည်မှာ သေချာသည်။ မည်သည့်နေရာမှာမှ မည်သည့်လွှတ်တော်မှာမှ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးကိစ္စကို ဆွေးနွေးရန် သင့်သည်ဟု ပြောဆိုစရာမလိုအပ်။
အဓိကမှာ ဤပြသနာပဋိပက္ခသည် အမှန်တကယ်ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း ရှိမရှိ ဆိုခြင်းကသာ အရေးကြီးသည်။ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်များနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးယူထားပါ၍ နိုင်ငံငြိ်မ်းချမ်းနေပါသည်ဟု လက်ညိုးထောင်ပြောဆို၍ မရ၊ ယခုအချိန်တွင် ကရင်ပြည်နယ်၊ကချင်ြပည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်များတွင် နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့ စည်းရေးပြသနာကြောင့် လက်မခံကြ၍ အကြီးအကျယ် စစ်ပွဲဖြစ်နေကြပြီ။ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာကြသော တိုင်းရင်းသား ညီအကိုမောင်နှမများမှာ ထိုင်းနယ်စပ်သို့ အလုံးအရင်းနှင့် ၀င်ရောက်နေကြသည်။ ဤပြည်တွင်းစစ်ကို ယခုအချိန်ထိ အာဆီယံနိုင်ငံတွင်း ပဋိပက္ခအဖြစ် မမြင်ကြသေး။ အာဆီယံဒေသတွင်းလုံခြုံရေးပဋိပက္ခကို မထိခိုက်သေးဟု သူတို့ မြင်နေသလားမပြောတတ်။ ယုံကြည်စိတ်ချရသော ပြသနာတခုမှာ လူတွေသောက်သောက်လဲ မသေသမျှ ဤပြည်တွင်းစစ်ကို သမရိုးကျ စစ်ပွဲဟု ထိုင်းနိုင်ငံကပါ သုံးသပ်လက်ခံထားနေသည်ကို တွေ့ ရသည်။ ကျွန်တော်တို့ အနေဖြင့်မူ ဤပြည်တွင်းစစ်ကို အမြန်ဆုံးဝိုင်းဝန်းဖြေရှင်းရန် လိုအပ်နေပြီ။ ပန်းနှင့်ပစ်ပေါက်ကစားနေခြင်းမဟုတ်သော ဤစစ်ပွဲမျိုးမှာ လူသေနေပါပြီ၊ ဒုက္ခသည်များ နေရပ်ကိုစွန့် ခွာ၍ ပြေးနေကြရပါပြီဟု ပြောနေသည့်တိုင် ဒေသတွင်းစိုးရိမ်ရပါသည်ဟု မည်သည့်အာဆီယံနိုင်ငံများက ထုတ်ဖေါ်ပြောဆိုခြင်းမရှိသေး။
ယခုအချိန်မှာ လက်နက်အရေအတွက်ဖြင့် အားသာသောစစ်အစိုးရသည် မကြာခင်လေယဉ်အထောက်အကူပြု အကူအညီဖြင့် စစ်ရေးကို အသုံးချနိုင်လာသည်။ ယင်းအခါ လူတွေ
မြောက်မြားစွာ သေကြေပျက်စီးနေကြပါတော့မည်။ လူသားဒိုင်းကာများအဖြစ် နယ်စပ်ဒေသရှိ ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများကို စစ်မက်ဖြစ်ပွါးရာ သတ်ကွင်းထဲတွင် အသုံးချလာမည်ဖြစ်သည်။ စစ်သားများကိုလည်း သေချင်သလောက် သေပေလေစေ သဘောမျိုးဖြင့် ပြောက်ကြားစနစ်နှင့် တိုက်နေသော တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးအဖွဲ့ အစည်းများ၏ သတ်ကွင်းထဲသို့အရောက်ပို့ ဆောင်ပေးနေသည်။ ကြားရသောသတင်းအရ ယခုတလအတွင်း နအဖစစ်သား အရေအတွက်မှာ ရ၀၀ ကျော်လာနေပြီဖြစ်သည်။ ယင်းမှာစစ်ဆင်ရေးအတွင်းက ရရှိထားသော ကကကြည်းမှ ဗိုလ်ချုပ်သက်နိုင်ဝင်း၏ အထက်ကို အစီရင်ခံ ပို့ ပေးသော လျှို့ ဝှက်ကြေးနန်းသတင်းအရဖြစ်သည်။ စစ်ပွဲဆိုသည်မှာ လူသေသောပွဲဖြစ်သည်။ တဖက်က စစ်တိုက်လာသော သူများမှာလည်း တိုင်းရင်းသားလူမျိုး ဖြစ်ပြီး တဖက်မှခုခံစစ်ကို ဆင်နွဲနေသော သူများမှာလည်း တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများသာဖြစ်သည်။ ကြားကမြေဇါပင် ဖြစ်နေသော စစ်သားများမှာ အသေခံယင်း လူ့ လောကမှ ထွက်ခွါပေးနေရန် အမည်စာရင်းကို သူ့ ထက်ငါ ပေးနေကြသလိုမျိုးဖြစ်နေသည်။ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးသမားများမှာ မိမိလူမျိုးနှင့် မိမိမြတ်နိုးသော ဒီမိုကရေစီနှင့် လူ့ အခွင့်အရေးအတွက် မျိုးချစ်တော်လှန်ရေးသမား သူရဲကောင်းပီသစွာ တိုက်ပွဲဝင်နေကြသည်ကို တွေ့ ရသည်။ နအဖစစ်သားတို့ မှာမူ သေလည်းလူမသိ ၊ ရှင်လည်းဘာမျှ အကျိုးခံစားပိုင်ခွင့်မရှိ ။ အသက်ကိုစွန့် သာသွားရသည်။ မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်များ ကောင်းစားရေးအတွက် တိုက်ပွဲဝင်နေကြရသည်ကို မသိဘဲ အသက်စွန့် သွားသူများလို ဖြစ်နေသည်။
နအဖစစ်အုပ်စုတွင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေမှ အစပြု၍ ဗိုလ်ချုပ်များ ဗိုလ်မှူးများအထိ ကြီးပွါးချမ်းသာ နေကြသည်။ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေတို့ အုပ်စုမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာငွေ သန်းရာနှင့် ချှီပြီး ချမ်းသာကြီးပွါးနေကြပြီ ။ ယင်းချမ်းသာကြီးပွါးနေမူကို နအဖစစ်သားတွေက မသိကြသေး။ သူတို့ ချမ်းသာကြီးပွါးနေဖို့ အတွက် နအဖစစ်သားတွေက ယခုလို နယ်စပ်ဒေသတွေမှာ အသေခံ စစ်တိုက်နေကြရသည်။ စစ်သားတွေ၏မိသားစုတွေမှာ သားသမီးများ ပညာကောင်းကောင်း မသင်ကြားရ။ နေစရာအိမ်မရှိ ဖြစ်နေကြရသည်။ ထို့ ကြောင့် နအဖစစ်သားများအနေဖြင့် ယခုအချိန်တွင် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ အစည်းများနှင့် အသေခံစစ်မတိုက်ဖို့ လိုသည်။ အသေခံစစ်တိုက်သည်
ဆိုခြင်းမှာ မိမိအကျိုးအတွက် တစိုးတစိမျ ပါလာလျင် ကောင်းသည်။ ယခုမူ မိမိအကျိုးးအတွက် တပြားတချပ်မျ မရှိသည့်စစ်ပွဲအတွက် နအဖအမိန့် ကို စွန့် ခွါပြီး ဘက်ကူးပြောင်းလာဖို့ လိုသည်။ သေချာသည့်အခြားအကြောင်းအရာတခုမှာ နအဖစစ်ဗိုလ်ချုပ်တို့ ၏ အမိန့် ကို မနာခံဘဲ ပြန်လှန်အာဏာဖီဆန်ကာ အမိန့် ပေးသူ စစ်ဗိုလ်ချုပ်များကို လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ပြီး အာဏာသိမ်းပွဲအထိ ပြုလုပ်သင့်ရန်သာလိုသည်။
နအဖစစ်သားတို့ အဖို့ယခုကဲ့သို့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတို့ က ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော် မဖြစ်အောင် ပြုလုပ်နေရသနည်း ဆိုသည်ကို စဉ်းစားသင့်သည်။ ယင်းမှာ သူတို့ အနေဖြင့် ကျိကျိတက်ချမ်းသာနေကြရသောကြောင့်ဖြစ်ပြီး နောက်တခုမှာ အာဏာစွန့် ရသည်နှင့် ကုန်းကောက်စရာမကျန်ရအောင် စုတ်ပြတ်သတ်သွားမည့် လက္ခဏာကို တွေးနေရ၍ဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာ သူတို့ ၏ရှေ့ကနမူနာပြထားသော ဦးနေ၀င်း၏ မိသားစုတခုလုံး ထောင်နန်းစံနေရခြင်းနှင့် ဗိုလ်ခင်ညွန့် တို့ မိသားစု ထောင်နန်း စံနေရခြင်းကို ကြောက်ရွံ့နေခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ သူတို့ အား သင်ပုန်းချေပါမည်ဟု မည်သူကပြောပြော သူတို့ အနေဖြင့် လက်ခံဝံ့သည့် သတိဖြင့်္တယုံကြည်နိုင်သည့် သူများ မရှိ။ ထို့ ကြောင့် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသန်းရွှေတို့အုပ်စုမှာ မသာပေါ်သည်အထိ ချမ်းသာကြွယ်ဝကာ သေတပန်သက်တဆုံး နေသွားမည့်သူများဖြစ်နေသည်။ သူတို့ ၏ချမ်းသာကြွယ်ဝနေမူများသည် သာမန်စစ်သားတို့ ၏ ကျည်တထော့င်ဖြင့် ပြည်သူတို့ ၏ အသက်တချောင်းကို ချိန်ရွယ်ထားနေခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ သူတို့ သည် အခြားသော နိုင်ငံများမှ အစိုးရကဲ့သို့အုပ်ချု့်နေသောသူများမဟုတ်။ လူသတ်နေသောလက်နက်ကိုင် အုပ်စုများဖြစ်သည့်အကြမ်းသမားများဖြစ်သည်။ သူတို့ ၏အကြမ်းဖက်ရန် စေခိုင်းမူကို လူသတ်သမားစစ်သားများက တသွေမတိမ်းလိုက်နာနေမူမှာ လွန်စွာ ရုပ်ဆိုးနေသည်။ ထို့ ကြောင့်နအဖစစ်သားတို့ အနေဖြင့် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေအပါအ၀င် အခြားသောဗိုချုပ်ကြီးများ၏ ချမ်းသာကြွယ်ဝနေမူများကို သိရှိရအောင် တပ်တွင်းဆွေးနွေးပွဲများဖြင့် လေ့လာပေးရန်လိုနေပြီ။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် အရေးကြီးသော ပြသနာမှာ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ရေးဆိုသော နည်းလမ်းကို မပြုလုပ်ခြင်းကြောင့်သာဖြစ်သည်။ လမ်းလွှဲစကားပြောနေခြင်းတို့ မှာ မည်သည့်နေရာမျိုးတွင်မျ အလုပ်မဖြစ်ပေ။ ဇိုမီးကွန်ဂရက်မှ ဒုတိယပင်လုံညီလာခံခေါ်ယူရန် ကြေညာခြင်းမှာ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတို့ ၏ ရင်ထဲကလာသောအတွေးအခေါ်ဖြစ်သည်။ ယင်းတာဝန်ကို အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်မှပါ လက်ခံသဘောတူသည်။ နောက်ဆုံးတွင် မကြာခင်က လွပ်မြောက်လာသော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကပါ ဒုတိယပင်လုံညီလာခံကို ခေါ်ယူရေးအတွက် တာဝန်ယူပါမည်ဟု ပြောဆိုသံကြားလိုက်ရသည်။ စင်စစ်ကျွန်တော်တို့ သိထားသည်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှာ အကောင်းဆုံးတိုက်စစ်မှူးဖြစ်သည်ဟု ထင်မြင်ယူဆူပေသော်လည်း ယင်းတာဝန်ကို မပေးသင့်သလို လက်မခံသင့်။ အကြောင်းမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေဖြင့် နှောင်ကြိုးမဲ့လွပ်မြောက်နေသောသူတယောက် မဟုတ်ကြောင်းကို လူတိုင်းနားလည်နိုင်ကြသည်။ အဖမ်းဆီးခံနိုင်သည်သို့ မဟုတ်ယုတ်စွအဆုံးလုပ်ကြံခံရနိုင်သည်အထိ စိုးရိမ်မိကြသည်။ ဤအချိန်သည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ လူ့့ဘ၀တွင် ပြင်ပကမ္ဘာ၌ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှူ နောက်ဆုံးအချိန်များသာ ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ အဖမ်းဆီးခံလိုက်ရပြီဆိုလျင် လွပ်မြောက်လာမည့်အချိန်သည် ပြော၍ခန့်မှန်း၍ မရသလို မည်သည့်နည်းနှင့်မျ လုပ်နိုင်ကိုင်နိုင် စွမ်းရည်များကို အကောင်အထည်ဖေါ်ဆောင်နိုင်မည့် လက္ခဏာလည်း မရှိတော့ပေ။
သို့ သော်လည်းဒုတိယပင်လုံညီလာခံခေါ်ယူမည့်တာဝန်ကို လက်ခံသွားသည့်အခါ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ၀ိုင်းရံပေးကြဖို့ လိုသည်။ မနေ့ကကြားလိုက်ရသောဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အင်တာဗျူးတခုမှာ ၂၁ရာစုပင်လုံညီလာခံကို အင်တာနတ်ဖြင့်လည်း ခေါ်ယူကျင်းပမည်မျိုးဖြစ်နိုင်သလို လူအများစုဝေးပြီး ညီလာခံခေါ်ယူခြင်းမျိုးလည်း ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မည်ဟု ကြားလိုက်ရသည်။ တယ်လီကွန်ဖရင့်ဖြင့် ၂၁ရာစုပင်လုံညီလာခံခေါ်ခြင်းမှာ လွယ်သော်လည်း လူတန်းစေ့မပါဝင်ခြင်းနှင့် လူအများးခိုးယူနားထောင်နိုင်သောကြောင့် အရေးကြီးသောညီလာခံများကို မပြုလုပ်သင့်ပေ။ မည်သို့ ပင်ဖြစ်စေ ၂၁ ရာစုပင်လုံညီလာခံကိုမူ ၁၉၉၀ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရပုဂ္ဂိုလ်များကသာ ခေါ်ယူရမှာဖြစ်သလို ပြုလုပ်ရမည့်သူများလည်းဖြစ်သည်။ ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မီတိကဲ့ သို့နှစ်ပေါင်းနှစ်ဆယ်သာကြာမြင့်သွားသည် ။ မည်သို့ မျ လွှတ်တော်မခေါ်နိုင်ခဲ့ ၍ အဖမ်းဆီးခံခဲ့ ရသည်များကသာ အဖတ်တင်ကျန်ခဲ့ မည်ကိုလည်း စိုးရိမ်ရသည်။ နောက်တခုကား ဤ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ သော အနိုင်ရပါတီများမှ သူတို့ နှင့် မရောထွေးသင့်ပေ။ အကြောင်းမှာသူတို့ အနေဖြင့် လွှတ်တော်သို့ တက်ရောက်ရန် တာစူနေကြသလို ဒုတိယပင်လုံညီလာခံကိုလည်း ရင်ကော့ပြီးတက်လာနိုင်စရာအကြောင်းအရာမရှိချေ။ သည်တော့ဒုတိယပင်လုံညီလာခံ သို့ မဟုတ် ၂၁ ရာစုပင်လုံညီလာခံကို ခေါ်ယူကျင်းပမည်ဆိုတော့လည်း မြန်မြန်သာခေါ်ကြပါတော့ဟု ပြောစရာသာ ရှိပါတော့သည်။ ယင်းခေါ်ယူသည့်အခါ နအဖစစ်ခေါင်းဆောင်များကိုပါ ဖိတ်မံပြီး ခေါ်ယူကြပါရန်ကိုလည်း သေသေချာချာ ထပ်လောင်းတိုက်တွန်းလိုက်ရပါသေးသည်။ ညီလာခံကို ဖိတ်ရမည့်တာဝန်ကမူ ရှိနေသည့်အတွက် ဖိတ်ကြားရန်သာရှိသည် ။ မတက်ရောက်ဘဲနေနိုင်လျှင် နေနိုင်ကြောင်းကို ဖိတ်စာတွင် တခါတည်း ရေးထည့်ပေးလိုက်က ရှင်းနေလောက်ပါသည်။ မည်သို့ ပင်ဆိုစေ ဒုတိယပင်လုံညီလာခံခေါ်ယူရေးနှင့် ပါတ်သက်၍ မီဒီယာများတွင် ပြောဆိုနေကြမည့်အစား ဖိတ်စာရိုက်ပြီး ညီလာခံခေါ်ယူရေးကိုသာ တစိုက်မတ်မတ်ဆောင်၇ွက်ကြမှသာ ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်နေသာ ယခုအချိန်တွင် လူ့ အသက်ပေါ်င်းများစွာကို ကာကွယ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သို့ မဟုတ်က နယ်စပ်ဒေသတွင် ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်နေသည်ကို ဂရုမစိုက်သလို ဖြစ်နေတော့မည်ဖြစ်သည်။ မျက်မှောက်ကာလယခုအချိန်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၌ ရုပ်ရှင်နှင့် ဗွီဒီယိုလောကတွင် ဗေလုဝတောင် မင်းသားဖြစ်နေသေးသည် ။ နိုင်ငံရေးပါတီများက ၂၁ ရာစုပင်လုံညီလာခံကိုများ ဘာကြောင့်များ မခေါ်ရနိုင်သနည်းဟု တွေးတောနေမိပါကြောင်း။
STATEMENT FROM THE CANADIAN CAMPAIGN FOR FREE BURMA
STATEMENT FROM THE CANADIAN CAMPAIGN FOR FREE BURMA (CC4FB)
On November 13, 2010, Burma’s heroine of democracy, Daw Aung San Suu Kyi,aNobel Laureate, was released from house arrest. She endured with great dignity more than 15 of the past 21 years in prison or under house arrest. While the world was caught up in celebrating this wonderful event, on this Human Rights Day, 2010 we have to remind the world that Burma is still very muchaprison.
The struggle continues and the next chapter will be crucial. The military’s rigged election one month ago guarantees this repressive regime has no intention of relinquishing power.
On her release, thousands of people gathered on University Avenue in Rangoon. The enthusiasm of the crowds was palpable. For the first time in years, Suu Kyi was permitted to do media interviews and meet officials from other countries. Ron Hoffmann, Canadian Ambassador to Thailand and also Ambassador designated to Burma, was unable to getavisa from the Burmese government. He was fortunate in being able to speak to her by phone. On November 16, 2010 we heard Daw Suu interviewed by Anna Maria Tremonti of CBC’s The Current.
Suu Kyi had to endure the personal agony of her husband not being allowed to visit her while he was dying of cancer because the regime refused himavisa. Finally, after ten years of being refused, her youngest son Kim Aris was grantedavisa by the military government of Burma. The dramatic and touching reunion at the Rangoon airport on November 23rd was unforgettable. The whole world watched as mother and son embraced and Kim proudly showed her the tattoo of the Fighting Peacock on his arm. The Fighting Peacock is the emblem of the National League for Democracy.
Notwithstanding this moment of joy, now it is NOTatime to celebrate and it is NOTatime for the world to assume things are improving in Burma. Yes, Daw Suu is free and her son has been allowedavisit, but nothing else has changed. There are still 2200 political prisoners in jail, many serving sentences as long as 65 years for peaceful activities in support of democracy in Burma.
On November 7, 2010 the military dictators in Burma heldasham election. The United Nations and almost every Western country regard this election asatotal sham. It was conducted on the basis ofaConstitution that the military claimed had been approved by the people of Burma,aConstitution which guarantees 25% of the seats in Parliament for the Tatmadaw (the military). The Constitution vote was held while the people of Burma struggled in the aftermath of Cyclone Nargis, the worst natural disaster in their recorded history. An estimated 138,000 people died whileaparanoid regime turned away shiploads of international aid.
A month after Daw Suu’s release, the news coming from Burma has diminished. The so-called democratically elected government, will, in coming days, announce their plans. History tells us they will continue to crush the will of the people of Burma and ignore their basic human rights. They will continue to deny them peace, freedom and democracy.
Vijay Nambiar, the Chief of Staff to the UN Secretary-General, who is also his temporary Special Adviser on Burma, visited Burma on November 27 and 28. Mr. Nambiar briefed the Security Council on December 6, 2010. After the briefing the Secretary General said “that the next two months will beacrucial period that could potentially determine the future course of Myanmar’s political development and its place in the international community.”
In our view, the Secretary General of the United Nations should appointanew special envoy on Burma who should be instructed to focus specifically on applying the pressure to the ASEAN countries and on India and China. It is unlikely that China will do anything that might interfere with its access to oil and gas and toaseaport on the Burmese coast. It may, however, be possible to persuade the government of Indian Prime Minister Manhoman Singh to change its policies and help in the struggle for democracy in Burma, given that country’s efforts to improve its relations with the United States.
Now is the time for the United Nations, the Western democracies and Japan to INCREASE their work in support of democracy in Burma. The government of Canada, under the leadership of Prime Minister Harper, has led the world in calling for meaningful reform in Burma. We congratulate him. Foreign Minister Lawrence Cannon has called for the release of all political prisoners.
We encourage them to continue to lead the world by example. We all remember the courageous steps Prime Minister Mulroney took in leading the struggle to end apartheid in South Africa. In granting Daw Aung San Suu Kyi honorary Canadian citizenship the present Conservative government set another such an example. There is no more important time than now for Prime Minister Harper and his government to demonstrate continued support for the people of Burma by takingastrong advocacy role in the struggle for democracy in Burma. Canada must lead the way so that peace justice and freedom may soon prevail over the dark shadows of the present regime ruling that country.
HUMAN RIGHTS DAY: DECEMBER 10, 2010
There are 2200 political prisoners in Burma. Two of those political prisoners have been awarded the John Humphrey Freedom Award, Min Ko Naing in 1999 and Su Su Nway in 2006.
The Canadian government has called for the release of all political prisoners in Burma. Please remember Su Su Nway and Min Ko Naing on Human Rights Day.
Zaw Kyaw zaw.w.kyaw@gmail.com 416 358 2318
Paul Copeland paulcope9@yahoo.com 416 964 8126 ext 142
ဘဝတွေကို ကြိမ်ဖန်များစွာ တရားကျခဲ့ဘူးတယ်။
ဘိုကလေးစစ်ဆင်ရေးမှာ ကရင်ရွာ (၉) ရွာကိုရက်ရက်စက်စက် မီးရှို့သတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ နဝတ အတွင်းရေးမှူး (၂) တင်ဦးလည်း ရဟတ်ယာဉ်ပျက်ပြီး၊ အသေဆိုးနဲ့သေခဲ့ရတယ်။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 12/09/2010 1 အကြံပြုခြင်း
ယနေ့အချိန်အခါတွင် နိုင်ငံတော်အစိုးရဟု အမည်ခံထားသည့် အာဏာသိမ်း စစ်အာဏာရှင် အစိုးရသည် အေးချမ်းသာယာပြီး ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သည့် စည်းကမ်းပြည့်ဝသော ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်သစ်ကြီးကို တည်ဆောက်နိူင်ရန် မူဝါဒလမ်းစဉ်(၇)ရပ်ကို ချမှတ် ဖော်ဆောင်ရွက်မည်ဟု ကြွေးကြော်ထားသော်လည်း လက်တွေ့တွင်မူ အပြောတမျိုး အလုပ်တမျိုးလုပ်ဆောင်လျှက် ရှိနေသည်ကို အားလုံးသိပြီး ဖြစ်ပါသည် ။ သူတို့ဖော်ဆောင်နေသည့် မူဝါဒ (၁)ရပ်ပြီး တိုင်းပြီးတိုင်း ပြည်သူများ စီးပွားရေးကား ကြပ်သထက် ကြပ်လာသည် ။ ငတ်သထက်ငတ်လာသည် ။ ထိုသို့ဖြစ်ပွားနေသည်ကို သူတို့မသိ၍ မဟုတ် ၊ သိသိကြီးနဲ့ တမင်ကြံစည်ကား တိုင်းပြည်ကို စနစ်တကျ ဖျက်စီးနေကြခြင်းဟု ပထမဦးစွာ ယုံကြည်ထားစေချင်ပါသည် ။ စစ်အာဏာရှင်တို့သည် တိုင်းသူပြည်သားများကို အသာထား သူတို့၏ အာဏာရှင် စနစ် ယန္တရားကြီးကို အဓိက မောင်းနှင်ပေးထားသည့် တပ်မတော်များနှင့် ၀န်ထမ်းများကိုပင် သူတို့၏ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လောက်ပင် မေတ္တာမရှိကြသည်ကို
သူတို့၏ လက်တွေ့လုပ်ဆောင် ချက်များတွင် ထင်ရှားစွာ တွေ့မြင်နိူင်လေသည် ။
တိုင်းပြည်တပြည်ကို အာဏာရှင်စနစ်ဖြင့် ကြာရှည်စွာ အုပ်ချုပ်လိုလျှင် ထိုတိုင်းသူပြည်သူသားတို့၏ အတွေးအခေါ် အမြော်အမြင် အားကောင်းစေမည့် ပညာရေးစနစ်ကိုဖျက်စီးရသည့် ဆိုသည့် မူဝါဒ ကိုသာ လက်တွေ့ အကောင်အထည် ဖော်နေကြသည် ။ အခြေခံ ပညာရေး စနစ်မှ စကာ တက္ကသိုလ် ပညာရေး စနစ် အဆုံး နေရာတိုင်းတွင် သမိုင်းမှန်တို့ကို ဖျောက်နိူင်သမျှ ဖျောက်ထားလာကြသည် ။
အထူးသဖြင့် ကျောင်းသားထု ညီညွတ်ရေးကို ပျက်ပြားအောင် နေရာ အနှံ့အပြားတွင် တက္ကသိုလ် ၊ ကောလိပ် ၊ သိပ္ပံ အစရှိသည့်ကျောင်းများ ဖွင့်လှစ်လာကြသည် ။ သာမန်အားဖြင့် ကြည်လျှင် တိုးတက်လာသယောင် ထင်မှတ်မှားလောက်စေပါသည် ။ တကယ့်လက်တွေ့တွင်မူ တက္ကသိုလ် အဆင့်ကျောင်း တစ်ခု ဖွင့်လှစ် တည်ထောင်ထားသော်လည်း ဘယ်ကျောင်းမှ ဆရာဆရာမ မလုံလောက် ၊ သင်ထောက်ကူ ပစ္စည်းက မပြည့်စုံ ၊ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းက စနစ်တကျ မရှိ နဲ့ မြန်မာ့ပညာရေးကို တစတစ တိုးတက်ဖျက်စီးနေကြခြင်းသည် ဖြစ်သည် ။ ကျောင်းပြီး၍ ဘွဲ့ရလူငယ်များကို
မေးကြည့်သည် ။ သူတို့ကိုယ်တိုင်က ၀န်ခံသည် ၊ သူတို့ဘာမှ မတတ် ၊ ထိုသို့ ဘာမှ မတတ်၍ သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်း ယုံကြည်ချက်မရှိ ၊ ရည်မှန်းချက်တို့ ပျောက်ဆုံးကုန်ကြသည် ။ ကိုယ့်ဘ၀ ရည်မှန်းချက်တောင် ပျောက်ဆုံးနေသော လူငယ်များ၏ တိုင်းပြည် အပေါ်ထားသော ရည်မှန်းချက်ကား ဘယ်လိုလုပ် ခိုင်မာမှု ရှိမည်နည်း ။ ဤသည်ကို မိဘနှင့် ဆရာတို့က မသိမဟုတ် သိသိကြီးနဲ့ လက်ခံထားကြခြင်းက သားသမီးများကို
ကိုယ်တိုင် ဖျက်စီး လိုက်သလို ဖြစ်နေသည် ။ အချိန်တန်၍ လုပ်ငန်းခွင် ၀င်ကြရမည့် အချိန် ထိုက်တန်သော အလုပ်မရလျှင် လူသဘာဝ ညည်းညူကြသည် ၊ ယနေ့ခတ် လူငယ်များသည် ညံ့ဖျင်းကြသည်ဟု ဝေဖန်ကြသည် ။ ထိုသို့ ဝေဖန်ခြင်းသည် တရားမျှတမှု မရှိ ။ ပင်ကိုယ်က ညံ့ဖျင်းခြင်း မဟုတ် ၊ ညစ်ထေးယုတ်မာသော စိတ်များဖြင့် လူငယ်များကို စနစ်တကျ ဖျက်စီးနေသော စနစ်ဆိုးကြောင့်သာ ဖြစ်သည် ။ ထိုစနစ်ဆိုးကို
ဆက်လက် လက်ခံနေကြလျှင် နောင်လာမည့် မျိုးဆက်သည် ယခုထက် ပိုမိုညံ့ဖျင်းမည်မှာ အသေအချာပင်ဖြစ်သည် ။
တမျိုးသားလုံး အကျင့်စာရိတ္တနှင့် ပညာရေ မြင့်မားရေး ဆိုသည့်ဆောင်ပုဒ်ကို လက်ကိုင်ထားသည့် စစ်အာဏာရှင်များ သည် တကယ့်လက်တွေ့တွင် အဖော်အချွတ် အသားပေး အနုပညာရှင်များနှင့် လူငယ်များ၏ အသိညဏ်ကို အဆိပ်ခတ်သော ညစ်နွမ်းသော စာပေများကို အားပေးနေသလောက် စစ်မှန်သော ပြည်သူလူထု အကျိုးပြု အနုပညာရှင်များကို အမျိုးမျိုး အဖုံဖုံ ဒုက္ခပေးလျှက် ရှိနေသည့်ကို လက်တလောတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် အနုပညာရှင် ၁၂ ဦး ၏ အနုပညာလုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ပိတ်ပင်လိုက်ခြင်းက သက်သေပြလျှက် ရှိသည် ။ ပြည်သူလူထု ကို အကျိုးပြုတဲ့ အနုပညာရှင်တွေကို အာဏာရှင်တွေက အနုပညာလုပ်ခွင့် ပိတ်ပင်လိုက်သလို ပြည်သူလူထုကလည်း အာဏာရှင် စနစ် တည်မြဲရေး အတွက် ကူညီပံ့ပိုးပေးနေတဲ့ အနုပညာရှင် အမည်ခံ လူတစ်စု ကို ပြန်လည် ဒဏ်ခတ်တဲ့ အနေနဲ့ အဲဒီလူတွေ ပါဝင် သရုပ်ဆောင်တဲ့ ဇတ်ကားတွေ ၊ သီချင်းတွေ ၊ စာတွေကို အားမပေးဘဲ နေလို့ရပါတယ် ။ အဲဒီလိုသာ ပြည်သူလူထုက ညီညာစွာ တုန့်ပြန်နိူင်ရင် ပြည်သူလူထု အကျိုးပြု အနုပညာရှင် တွေ ဘက်က ရပ်တည်နေတယ် ဆိုတာကို သက်သေပြနိူင်သလို ၊ အာဏာရှင် လက်ကိုင်ဒုတ် လုပ်စားတဲ့လူတွေကို ပြည်သူလူထုက လက်မခံပါဘူး ဆိုတာ
သက်သေပြနိူင်တဲ့ တခုတည်းသော အလွယ်ကူဆုံး လုပ်ဆောင် နိူင်တဲ့ လုပ်ဆောင်ချက် ဖြစ်တယ်လို့ ကျနော် ထင်မြင် ယူဆမိပါတယ်။
" နိူင်လိုသူ ကို အရှုံးပေး နှလုံးအေးတဲ့ ဆေး " ဟူသည့် မြန်မာ စကားပုံ တခု ရှိပါသည် ။ ထိုစကားသည် ခန္တီပါရမီကို အဆုံးစွန်ထိကျင့်ကြံပွားများကာ တဖက်သား ကို အရှုံးပေးလိုက်ရ၍ ကျေနပ် ၀မ်းမြောက်သူ များ အတွက် တကယ်ကောင်းပါသည် ။ သို့သော် ကိုယ်တိုင်က အရှုံးပေးလို စိတ်မရှိပါဘဲနှင့်
မတတ်သာ၍ အရှုံးပေးလိုက် ရသူများ အတွက် နှလုံးမအေးတဲ့ အပြင် ပိုမို ဆိုးဝါးလာသည်ကို တွေ့ရှိနိူင်သည် ။ ကိုယ်ကို အမြဲတမ်း အနိူင်ယူလိုသူကို
မကျေနပ်ဘဲ အရှုံးပေး နေရသည့် အခါ အစ ပထမတွင် သိပ်မသိသာသော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင် တဖြည်းဖြည်းနှင့် နာကြည်းမုန်းတီးလာသည် ၊ ရွှံရှာလာသည် ၊ တုန့်ပြန် ချင်စိတ်တွေ ပေါက်လာ သည် ။ ထို့သို့ လုပ်ချင်စိတ်တွေ ပေါက်ဖွားနေသော်လည်း စိတ်ထဲတွင် အကြောက်တရားက လွှမ်းမိုးနေသည့် အခါ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြန်ပြီး ဒေါသထွက်လာ သည် ၊ ကိုယ့်နှင့် စိတ် တထပ်တည်း မကျတော့ ၊ ထိုအခါ စိတ်မကြည် ၊ စိတ်မကြည်လင်သည့် အတွက် ညဏ် မရွှင်တော့ ၊ ညဏ်မရွှင်သော အခါ အတွေးအခေါ်တို့ ညစ်ညမ်းလာသည် ၊ လူ့သဘာဝ အရ စိတ်ညစ်လျှင် တရားထိုင်သူထက် ၊ မဟုတ်တာ လုပ်ကာ စိတ်ထွက်ပေါက် ရှာသူ က များသည် ။ အတွေးအခေါ်တို့ ညစ်ညမ်းလာသည့် အခါ ကမ္ဘာစောင့် တရားဟု လူသိများသည့် အရှက် အကြောက် တရားတို့ကို အမြင်လွဲမှားလာကြသည် ။ မကောင်းတာ လုပ်ရမည်ကို မရှက်ကြဘဲ ကောင်းတာလုပ်တာကို ရှက်လာတတ်ကြသည် ။ အကုသိုလ် အလုပ် လုပ်ရမည်ကို မကြောက်ကြဘဲ ကုသိုလ် အလုပ် လုပ်ရမည်ကို ကြောက်လာကြသည် ။
အတွေးအခေါ် ညစ်ညမ်းလာသည့်အခါ ကိုယ့်ကို ကိုယ်တောင် မယုံကြည်ကြတဲ့ လူတွေဟာ အခါ သူတပါးကို ယုံကြည်ဖို့ ဆိုတာ ပိုမိုခက်ခဲလာတယ်
လူတိုင်းကို သံသယနဲ့လိုက်ပြီး ကြည့်လာတတ်ကြတယ် ၊ ကိုယ့်စိတ်နဲ့နှိုင်းပြီး လူတကာကို တိုင်းတာလာကြတယ် ။ အဲဒီလို အဘက်ဘက်က
အားနည်းချက်တွေ ကြောင့် မြန်မာ ဒီမိုကရေစီ အရေး လုပ်ရှားနေသူတွေကို လုပ်စားနေပါတယ်ဆိုပြီး ၀ါးလုံးရှည်နဲ့ ပတ်သိမ်းပြီး ရမ်းသမ်းပြောလာကြတယ် ။ ဒီလို အကျိုးဆက်တွေကြောင့် လုပ်ရှားနေသူတွေကို ကူညီပံ့ပိုးချင်ကြတဲ့ လူတွေရဲ့ အတွေးအခေါ်တွေပါ
ေ၀၀ါးကုန်တယ် ။ ငါတို့ကူညီလည်း အလကားပါဘဲ ၊ တကယ်လုပ်ရှားတဲ့ လူတွေ လက်ထဲမရောက်ဘဲ လုပ်စားတဲ့လူတွေလက်ထဲ ရောက်သွားနိူင်တဲ့ ဆိုတဲ့ အတွေးအခေါ်တွေကို လက်ကိုင်ထားလာကြတယ် ။ နောက်ဆုံးရလဒ်က ပြည်သူလူထု ကောင်းစားရေး ဦးတည်ချက်ကို
ဘ၀တွေ ပေးဆပ်ပြီး လုပ်ကိုင်နေကြတဲ့ လူတွေက လုပ်ရှားဖို့ ခွန်အားတွေ နည်းပါးကုန်တယ် ။ တိုင်းပြည် အတွက် တကယ်လုပ်ပေးနေတဲ့လူတွေမှာ
သူတို့ကိုယ်ကျိုးစီးပွားရှာဖို့ အချိန်မရှိကြပါဘူး ။ ပြည်သူလူထုအတွက် အလုပ်လုပ်ပေးနေတဲ့လူတွေကို ပြည်သူလူထုက ပြန်လည်ကူညီပေးမှ
မြန်မာ့နိူင်ငံ ဒီမိုကရေစီ ဆိုတဲ့ ပန်းတိုင်ကို ဆွဲကိုင် နိူင်မှာပါ ။